Amanzi amane (indlu encinci) eHainer See - I-Airbnb
Amanzi amane (indlu encinci) eHainer See
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguMathias
Iholide kwindlwana esechibini "Vierwasser": ulwandle phambi kwakho, ityeya esecaleni kwelanga nayo yonke into oyithandayo ngeholide.
Isebenza kakuhle kakhulu, kodwa ifenitshala ehlala abantu eyenziwe ngezinto zale mihla nezendalo: ii-oven floorboard, isitovu sokusebenzela, into yokufudumeza engenabugocigoci, oomatrasi bokulala eseluphahleni, neendawo zokukhanyisa ezicingwe kakuhle. Ihamba ne-nostalgia encinci: isixhobo sokudlala amarekhodi.
Zenze uthi zava uze uphole kule ndlu incinci.
Emva kokuba ufikile echibini, ungena kwi- "Vierwasser" ngomnyango osecaleni uze ungene kwipaseji encinci enendawo yazo zonke izinto ezisixhenxe. Igumbi lokuhlambela elincinci kodwa elifanelekileyo linezindlu zangasese neshawa. Iithayile zamaplanga ezifudumeleyo kunye ne-chic zigcwalisa umfanekiso. Igumbi lokuhlala elivulekileyo, elivulekileyo ukusuka epasejini, liyindawo entle yokubuka ityeya namachibi. Iifestile ezinkulu zenza kubekho ukukhanya okwaneleyo. Ikhitshi elincinci elineoveni nomatshini wokuhlamba izitya kunye nezixhobo ezipheleleyo ezikumema ukuba upheke uze wonwabele. Itafile yokutyela inendawo apha xakunetha ngaphandle. Kwigumbi lokuhlala elitofotofo, ungazenza uzive uthe zava kwibhedi yasemini, elikwalala iindwendwe eziyi-2. Ukusuka kwisitulo sebhasikiti esilengayo okanye izitulo zokuhombisa, unokonwabela ukutshona kwelanga xa imozulu ingadlali. Ioveni yokusebenzela imele ifudumale kakuhle. Ithivi, izithethi, ingqokelela yemidlalo kunye nokunye ikunika iintlobo ezahlukeneyo. Nkqu nabadlali beerekhodi kunye nee-banoculars bezicingelwa. Ileli iya kwigalari yokulala, ukusuka apho unokujonga isibhakabhaka esineenkwenkwezi. Hamba ngeskrini phambi kweefestile ukuze ukhusele iindwendwe ezingamenywanga ngoxa zisabethwa ngumoya. Ithala ikwayindawo etofotofo. Ukuhlala, itafile kunye neparasol kwenza iholide elunxwemeni iphumle. Kukwakhona nendawo yokoja yezinto ezongezelelekileyo zokupheka. Yonke into ihonjiswe ngendlela ecingwe kakuhle ngendlela yaseScandinavia kwaye ithembisa ukuphumla kamnandi.
4.98 · Izimvo eziyi-117
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi117
I-Hainer See yindawo eyayikade isakhiwa ngemini, eyayikhukula de kube ngo-2010, ngoko yeyendawo ekhethekileyo kumzantsi weLeipzig. Ukususela ngo-2008, le ndawo yenzelwe kuphela abakhenkethi. Ngoko yonwabela ukuqalisa nokuzola kwechibi elihle. EMzantsi weLeipzig nakwidolophu yaseBorna, unokubalekela kubomi bemihla ngemihla apha. Amanzi acace ngeglasi, iilwandle ezinentlabathi kunye nendalo yonke zibangela ukuphumla kamnandi.
Umbuki zindwendwe ngu- Mathias